Tiirkii Wadankow, Tahriib Talo ma ahee, Bal Tijaaro Tijaabiya | Universal Somali TV
In la alifo Hal Abuuryo Ganacsiga lugu Guubaabinaayo
Soomaalida waxay caan ku yihiin “Hal Abuurka” sida gabayada, maansada, maahmaahyada iyo halqabsiga. Oraahyada hal abuurka ah saameyn weyn ayay ku yeelataa dadka dhageysta. Tusaale, waxaan mar dhow isku daynay in aan gelino xayeeysiin Hal qabsiyo sida midka hoos ku xusan ee ku boorinaaya dhalinyarada ganacsiga bogga internetka iyo Facebuuga ibinis.com (Waabog Soomaaliyeed oo sida E-Bay oo kale). Halqabsiyada aan gelinay ayaa waxay sababtay in dhalin yaro badan u riyaaqaan, jawaab iyo mahad celinba ay u soo diraan maamulka bogga is ka leh. Waxay kaloo sababtay dhalinyaro badan in boggaas booqdaan. Gabyadana waxaa tusaale u ah gabaygii “Farshaxan” ee uu curiyay Allaha ha u naxriistee Abwaan Maxamed Gacal Xaayow”. Dhalin yaro faro badan ayaa ka dhageysatay video-gaan
Dhibaatada ugu weyn oo jirta waxay tahay in dhalinyarada ay fikrad qalad ah ka fahamsan yihiin ganacsiga bilowgiisa. Qaar ayaa aminsan in ganacsiga loo dhasho, in lacag badan ay u baahan tahay, in jaamacad loogalo IWM. Marka sidii looga dhaadhicin lahaa fikradaha qaldan, kalsoonina loo gelin lahaa waxay u baahan tahay dadaal wadareed. Marka waxaan ku boorinaynaa dadka qibradda u leh curinta gabayada, maansooyinka, geeraarada, buraamburka, maahmaahyada, halqabsiyada IWM in ay curiyaan hal abuuryo ku dhiiri gelinaysa dhalinyaradeena wax soo saarka, ganacsiga iyo waxbarashada. Maxaa yeelay oraahda qofka bani’aadamka saamayn weyn ayay ku yeelataa wayna ka awood weyn tahay hubka maadiga ah ee aanu maanta adeegsano. “Ereyga hufan baa irid kasta fura” , hadana ogow“ Eray Xumi Urug Kici”.
Ganactada Waaweyn in ay Maal geliyaan Dhalinyarada
Ka sheekeeyaan sheekadooda sida ganacsiga ay ku galeen, waxay la kulmeen dhib iyo dheefba, xikmadaha ugu muhiimsan ay ka barteen ganacsiga. Sheekooyinka waa habka ugu fiican ee loo gudbiyo warbixinada muhiimka, qofka maqlaana waa u cuntamaysaa. Sheekooyinkan waxaa lugu gudbin karaa Youtubeka, Seminaaro loo sameeyo dhalinyarada iyo warbaahinta inteeda kale.
Ku deeqaan deyn aan dulsaar lahayn oo bilow u noqda. Ama ku siiyaan deyn badeecadaha jumladda ay ku iibiyaan, si ayaguna tafaariiq ahaan ugu iibiyaan, faa’idana ugu helaan. Sidoo kale, dad ayaa jira oo ku bilaaba ganacsiga Dallaalnimo, wuxuu isku keenayaa ganacsatada jumladda iyo kuwa tafaariiqda, halkaasoo ducadiisa lugu siinayo.
Suuqyadii hore u jiri jiray in dib loo furo
In Hay’adaha Waxbarashada Ganacsiga ku Guubaabiyaan Da’yarta Soomaaliyeed
Diyaasbarada Reerahooda Kaalmada u dira
Kan-xigaWAANO GUUR EE KA SOCOTA WALAALKIIS DHALE
Kan-horeAdoo Harsan Waayay Cashuur Ma Kuu soo...
63,298,220 unique visits